कानुनी राजमा विश्वास गर्ने म कसरी रेशम चौधरीलाई रिहा गर्न सक्छु ? : प्रधानमन्त्री – ramechhapkhabar.com
कानुनी राजमा विश्वास गर्ने म कसरी रेशम चौधरीलाई रिहा गर्न सक्छु ? : प्रधानमन्त्री
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सरकारले रेशम चौधरीलाई रिहा गर्न नसक्ने स्पष्ट पारेका छन् । उनले आफू कानुनी राजमा विश्वास गर्ने मान्छे भएकाले अदालतले जे गर्छ त्यही अनुसार हुने बताए ।
शनिबार लोकान्तर डट्कमका प्रधान सम्पादक विमल गौतमलाई विशेष अन्तरवार्ता दिँदै ओलीले रेशम चौधरी छुट्छन् कि छुट्दैनन् भन्ने विषय आफ्नो नभएर अदालतको भएको बताएका हुन् ।
म कसरी भन्नु सक्छु र रेशम चौधरीलाई रिहा गर्छु भनेर ? मुद्दा अदालतमा छ । म कसरी रिहा गर्न सक्छु’, उनले भने, ‘म कानुनी राजमा विश्वास गर्छु । रेशम चौधरी छुट्नु हुन्छ कि हुँदैन मेरो कुरा होइन, अदालतको विषय हो । उनी दोषी छन् कि छैनन् अदालतले छानबिन गर्ने कुरा हो । म न्यायाधीश होइन । मन्त्रिपरिषद्ले फैसला गर्दैन । मन्त्रिपरिषद्ले गरेको फैसला पनि त अदालतले उल्टाइदिने रैछ नि ।’
मन्त्रिपरिषद्ले गर्ने निर्णयका आधारमा राष्ट्रपतिबाट क्षमा गर्न सक्ने व्यवस्था भएपनि उनले मन्त्रिपरिषद्ले रेशम चौधरीको विषयमा फैसला नगर्ने र अदालतले भनेअनुसार नै हुने स्पष्ट पारे ।
बरु ओलीले आफू प्रधानमन्त्री भएमा रेशम चौधरीलाई रिहा गर्छु भनेर माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्डले भनेको भन्दै कटाक्ष गरे ।
पाल्पा — जिल्ला संकट व्यवस्थापन समितिको बैठकले सबै स्थानीय तहमा क्‍वारेन्टिन र आइसोलेसन तयारी राख्न निर्देशन दिएको छ । कोभिड–१९ संक्रमणको सम्भावनालाई मध्यनजर गर्दै पहिलो संचालनमा आएको क्‍वारेन्टिन, आइसोलेसन केन्द्र तयारी अवस्थामा राख्न निर्देशन गरिसकेको प्रमुख जिल्ला अधिकारी योगेन्द्रप्रसाद पाण्डेयले बताए । ‘छिमेकी मुलुक भारतमा कोभिड–१९ को संक्रमण तथा मृत्युदर समेत बढ्दै गएको सन्दर्भमा खुला सिमानाका कारण भारतबाट मानिसहरुको आवतजावत भएको छ,’ प्रजिअ पाण्डेयले भने, ‘त्यसैले यो जिल्लामा पनि भारतबाट फर्कनेको संख्या बढ्न सक्छ । त्यसैले सचेत गराएका छौं ।’